ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ ငါးလရှိပါပြီ။ ၀မ်းချုပ်လိုက်၊ ၀မ်းလျှောလိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ၀မ်းမှန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲရှင့်။ MiMi(FB) A. တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မကြာခဏ ၀မ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းချုပ်တတ်ရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးစတာတွေကို...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သမီးအခု ကိုယ်ဝန် ၇ လ ထဲမှာပါ။ နှာအရမ်းမွှန်နေလို့ တခြားဆေးလဲ ရမ်းမသောက်ရဲပါဘူး။ အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ခါးနဲ့တင်ပါးနေရာက ညောင်းညာအားလျော့သလို ဖြစ်နေလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့ဆီက အကြံဥာဏ်လေး တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နေပါ့မယ် ဆရာ။ Cold medications အအေးမိသက်သာဆေးတွေ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် စက်ချုပ်သင်လို့ ရ၊ မရ ….
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ စက်ချုပ်သင်လို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား။ Khaing Mie(FB) A. စက်ချုပ်သင်တဲ့အခါ အထိုင်အထ အကုန်းအကွများသလား၊ ခြေထောက်နဲ့နင်းတဲ့စက်လား ဒါတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ စက်ချုပ်တဲ့အချိန် နှစ်နာရီ-သုံးနာရီလောက်ပဲ ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။...